Shirweyne dib u heshiisiineed oo maanta ka furmaya Baydhabo |
Shirweyne dib u heshiisiineed oo maanta ka furmaya Baydhabo
Magaalada Baydhabo ayaa lagu wadaa inuu maanta ka furmo shirweyne dib u heshiisiineed oo looga hadlayo dhamestirka maamul goboleed ay yeeshaan gobollada koofur galbeed ee dalka.
Qaban qaabada shirka dib u heshiisiinta ayaa ka socota magaalada Beydhabo kaasoo la filayo inuu halkaasi ka furmo, waxaana la adkeeyay ammaanka magaalada Baydhabo.
R/wasaare Dr. Cweli Sheekh Axmed ayaa la filayaa inuu gaaro Baydhabo, si uu uga qeybgalo shirka halkaasi ka furmidoona, iyadoo halkaasi ay sii joogeen, gudoomiyaha Baarlamanka, xildhibaano iyo wasiirro .
Gudoomiyaha Baarlamanka oo gelinkii dambe ee shalay saxaafadda kula hadlay Beydhabo ayaa ku dhawaaqay in maanta uu magaalada Baydhabo ka furmi doono shir dib u heshiisiineed oo loo qabanayo ummadda ku dhaqan gobollada koofur galbeed.
Shirkan dib u heshiisiinta ah ee lagu wado inuu maanta furmo ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha Baralmanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maalmihii la soo dhaafay howlo dib u heshiisiin iyo dhex dhexaadin ah ka waday magaalada Baydhabo.